China 15kV 200A Load Break Elbow Connector 2 orinasa sy mpanamboatra | Anhuang
15kV 200A fiatoana enta-mavesatra Connector elbowdia famaranana plugin miaro sy voaroaka tanteraka amin'ny fampifandraisana ny tariby ambanin'ny tany amin'ny rafitra fizarana herinaratra fanodinana pad-mound, boaty sampana famatsiana herinaratra manodidina, boatin'ny sampana tariby miaraka amina lozam-pifamoivoizana. Ny mpampitohy kiho sy ny sisin'ny bushing dia misy ny singa ilaina amin'ny fifandraisana tapaka rehetra. Izy io dia afaka mamaly ny filan'ny tsipika amin'ny nokleary.
Loadbreak Elbow Connector dia famaranana miaro sy voaroaka tanteraka amin'ny fampifandraisana ny tariby ambanin'ny tany amin'ireo mpanova, switchgear, ary fitaovana hafa miaraka amina bushbreakings, junction, na mpampitohy loadbreak hafa.
Ny kiho ANHUANG dia mameno ny fepetra takiana amin'ny IEEE Standard 386 ary azo ovaina tanteraka amin'ny vokatry ny mpifaninana.
Reference No. Fitaovana hazo fijaliana conducteur (mm2) Ahinjiro noho ny insulated (mm)
Previous: 15kV 200A Loza Break Elbow Connector
Manaraka: 25 kV 250A Fitaovana bushing
Connector elbow maty
25kV 200A Cap fiarovana
15kV 200A Cap fiarovana